HomeSuuqa kala iibsigaChelsea oo kusoo biirtay tartanka loogu jiro ciyaaryahanka Barcelona ka tagaya xili ciyaareedkan ee L.messi
November 30, 2020 Suuqa kala iibsiga, Wararka Ciyaaraha Maanta 0
Saxafiga kubada cagta ee reer Spain Guillem Balague ayaa shaaca ka qaaday in kooxda Chelsea ay xaqiiqdii salka ku hayso halyeeyga reer Argentine ee Lionel Messi iyada oo weeraryahanka ku guulaystay abaalmarinta FIFA Ballon d’Or uu ka tagayo kooxda Barcelona xagaaga dambe.
Weeraryahanka ayaa isku dayay inuu xaqiijiyo ka dhaqaaqista kooxda reer Catalan intii lagu jiray suuqii kala iibsiga, si kastaba ha ahaatee, Barcelona ayaan diyaar u ahayn inay u ogolaato inuu ka tago koox qiimo jaban.
Heshiiska haatan ee Messi ee kooxda Ronald Koeman wuxuu ku egyahay bisha Juun ee soo socota, laakiin, sida ay haatan tahay, wuxuu awoodi doonaa inuu ka tago kooxda si bilaash ah dhamaadka xilli ciyaareedka 2020-21.
Man City ayaa si weyn loogu tixgeliyaa inay yihiin kuwa ugu cadcad ee 33 jirkaan, si kastaba ha ahaatee, Balague ayaa sheegay in Chelsea ay sidoo kale ku jirto xaaladdan isla markaana ay u dhaqaaqi karto xiddiga reer Argentina.
“Chelsea xaqiiqdii waxay ku jirtaa is diyaarin hadii Messi uu diyaar noqdo bixintaan. Taasi waa run. Chelsea waxay ku adkeysan doontaa inay rabto inay maqasho wax walba oo socda. Haddii ay lacag haystaan ​​iyaguna waxay doonayaan inay ka qayb qaataan. Xusuusnow, ma jiraan wax lacag ah oo lagu kala wareejinayo, ”ayuu Balague ku yidhi YouTube channelkiisa.
Messi ayaa ku guuleystey inuu dib u helo lix jeer isla markaana wuxuu diiwaan geliyey afar caawin 11 kulan oo uu u ciyaaray kooxda reer Catalan ololahan, halka uu 640 gool dhaliyey 742 kulan oo uu u ciyaaray kooxda reer Spain tartamada oo dhan intii uu ku jiray xirfadiisa cajiibka ah.